Blueway Automatic Vending Machine is customized for the American market, which is suitable for taxi, bus car, စသည်တို့. Currently the standard model can be filled with 24 bottles of beverage, and can be paid by credit card. If any co-operation chances, please feel free to contact us.
သ, Blueway ပြီးပြီ 10000 ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်. What's more, Blueway သည်တရုတ်စျေးကွက်ရှိ Hilton Hotel မှထောက်ခံသည့်အမှတ်တံဆိပ်လည်းဖြစ်သည်. Blueway သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိတ်ဖက်များအားအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်. မေး: Which year do you start export this product to Overseas?
က: We’ve started exporting automatic vending machine to America since 2014.
မေး: Any certificatons need for America import procedure?
က: Bill of lading, commercial invoice & packing invoice.
မေး: How many sets that you can be OEM?
က: At least 50 sets.
မေး: Can I chose the colour?
က: Grey for short production period.
7K သည် 9K 12K ခရီးဆောင် AC အ